Video:-Kismaayo oo si weyn looga xusay 1-da Luulyo – Idil News
Video:-Kismaayo oo si weyn looga xusay 1-da Luulyo
Posted By: Idil News Staff July 1, 2020
Xaflada xuska sanadguurada 60-aad ee maalinta midowga labada Gobol iyo Xornimada Somaliyed,ayaa lagu qabtay xarunta Madaxtooyada Jubaland,waxana ka hadlay goobta oo ka jeediyay khudbad aad uqiimo badnayd Madaxweyne Axmed Madoobe.
“Madax banaanida Somaliyed waxaa udub dhaxaad u ah waynaynta iyo ilaalinta dastuurka dalka u dagan. Dawladda Federaalka ee haatan taagan waxay ku timid garab istaag iyo taageero ay ka heshay xukuumadihii ka horeeyay. Sidaa darteed ma aha in uu madaxda haatan haysa xilka ay hunguriyeeyaan mudo korodhis dastuurka ka hor imaanaysa oo aan sharci ahayn,” Ayuu yiri Madaxwayne Axmed Maxamed Islaam.
Madaxweynaha oo hadalkiisa sii wata,ayaa yiri markale…